အစားအစာညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အစာဖျင်းအစားအစာများသည်တိုတောင်းသောသက်တမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သုတေသနပြုချက်ကသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ထို့ကြောင့်သင်စားသောအရာအများစုသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွှတ်ပါကအခွင့်အလမ်းပိုများလာသည့်ရောဂါများကိုအနီးကပ်လေ့လာကြည့်ကြစို့။
1.3 သငျသညျ trans ဆိုတဲ့အဆီတွေအများကြီးကိုစားသလား
လူတို့သည်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်အစားအစာမစားနိုင်ပါ။ အစာရှောင်ခြင်းအစားအစာကိုထိရောက်သော (သို့သော်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော) ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်စေသည့်အချိန်ကာလကြောင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေကောင်းမွန်သောအစားအစာကိုစားရန်သင်တတ်နိုင်သမျှလုပ်သင့်သည်။
ဆား၊ အဆီသို့မဟုတ်သကြားဓာတ်ကြွယ်ဝသူများ (သို့မဟုတ်တစ်ချိန်တည်း) တွင်သေဆုံးမှုနှုန်းမြင့်မားသောအစားအစာများ။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အမျှင်များအကြားမညီမျှမှုရှိသောအစားအသောက်များသည်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည် (အစာရှောင်ခြင်းအစာနှင့်ပြုပြင်ထားသောအစားအစာများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းများစွာရှိသည်) အခြေအနေသည်အင်ဆူလင်ကိုဆီးချိုရောဂါနှင့်အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည်။
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ ပြုပြင်ထားသောအစားအစာများ။ အဲဒီမှာသူတို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်အန္တရာယ်များတာလဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
အစားအစာသို့ဆားထည့်ခြင်းသည်အရသာတိုးမြှင့်ရန်အတွက်စျေးပေါ။ ရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆိုဒီယမ်အလွဲသုံးစားမှု၏အကျိုးဆက်များသည်အလွန်အန္တရာယ်များသည်၊ အရည်ကိုထိန်းထားခြင်းမှသည်နှလုံးရောဂါနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်ကိုထိခိုက်နိုင်သော ယေဘူယျအားဖြင့်အထူးသဖြင့်လူတစ်ယောက်သည်သွေးတိုးနေလျှင်ဖြစ်သည်။ အဆိုးဆုံးကတော့သင်ထင်သည်ထက်ဆားပိုစားလေ့ရှိသည် ၎င်းသည်စူပါမားကတ်ထုတ်ကုန်အများစုတွင်မြင်နိုင်သို့မဟုတ်သိုဝှက်ထားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာသင့်ရဲ့အစားအစာကိုတိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဆားထဲမှာသေချာပေါက်လေ့လာခြင်းကအကောင်းဆုံးအစပဲ။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် တစ်နေ့လျှင်မီလီဂရမ် ၂၃၀၀ မီလီဂရမ်ထက်မပိုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ အစားအစာဒိုင်ယာရီကိုအချိန်အတန်ကြာသိမ်းထားခြင်းကသင်သည်ရက်သတ္တပတ်၏ထိပ်ဆုံးနေ့ရက်များကိုကျော်လွန်နေလျှင်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဆားလျှော့ချရန်အရေးယူရမည့်အချိန်ရောက်ပြီ။
သငျသညျ trans ဆိုတဲ့အဆီတွေအများကြီးကိုစားသလား
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပြင်သစ်ကြော်အပါအ ၀ င်အစားအစာများစွာတွင်ပါ ၀ င်သည့် trans trans အဆီသည် LDL (သို့) မကောင်းသောကိုလက်စထရောနှင့် HDL နိမ့် (သို့) လက်စထရောကိုမြင့်တက်စေသည်။ အစဉ်အဆက်၌, နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်နောက်တဖန်ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား ၂ ထပ်မံမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်စားတဲ့အရာကလွှမ်းမိုးမှုသာမကဘဲသင်မလုပ်တဲ့အရာတွေလည်းပါပါတယ်။ ထို့အပြင်သုတေသနပြုချက်သည်ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အခွံမာသီးများနှင့်မျိုးစေ့များကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အမင်းထိခိုက်နစ်နာစေသည့်အစားအစာများကိုညွှန်ပြနေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အစားအစာညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များမှလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းမှာပြုပြင်ထားသောအစားအစာများ၏တည်ရှိမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်အပင်အစားအစာများ၏တည်ရှိမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေးထားသောအဟာရသည်အလွန်ညံ့လာသောအခါခန္ဓာကိုယ်သည်အချက်ပြမှုများကိုထုတ်လွှတ်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကခင်ဗျားနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိသလား။ သင်၏အစားအစာသည်အရေးတကြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုရှိမရှိသိရှိရန်ရှာဖွေကြည့်ပါ။
တိုတောင်းသောကာလ၌များစွာသောအားနည်းချက်များရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအစားအစာညံ့ဖျင်းခြင်း၏အကျိုးဆက်များသည်အမှန်တကယ်လေးနက်လာသည်.
မတော်လျော်သောအစာစားခြင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအန္တရာယ်တိုးပွားစေသည် သံ၊ ဖောလိတ်၊ ဗီတာမင်စီစသောအာဟာရများမရှိခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများနှင့်ရောဂါများ၊ ဗီတာမင်ကေ, ကယ်လစီယမ်နှင့်သင်တန်းဖိုင်ဘာ.
အကျိုးဆက်အားဖြင့်အချိန်ကုန်လွန်စွာအစားအစာကိုညံ့ဖျင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပါက (လူတစ် ဦး စီအပေါ် မူတည်၍ အကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည်) ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများနှင့်ရောဂါများခံစားရနိုင်သည့်အန္တရယ်ရှိသည်။ ၄ င်းတို့ကိုအများမြင်နိုင်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်လူသိအများဆုံးအကျိုးဆက်များမှာအဝလွန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အစာအာဟာရချို့တဲ့ခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေနိုင်သည့်ပိုလျှံသောကယ်လိုရီများပါရှိသည်အထူးသဖြင့်၎င်းသည်အထိုင်များသောလူနေမှုပုံစံနှင့်ပေါင်းစပ်လျှင်။ သို့သော်အောက်ပါကဲ့သို့သောအခြားဆိုးကျိုးများလည်းရှိသည်။
လူတိုင်းသည်မိမိတို့၏အစားအစာကိုဂရုပြုသင့်သည်၊ ၄ င်းတို့အားအစွမ်းကုန် လုပ်၍ ကျန်းမာစေရန်နှင့်မတူကွဲပြားစေရန်လုပ်သင့်သည်။ သို့သော်အစားအစာမှအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးလုံလောက်သောအချိုးအစားဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာများကိုရွေးချယ်ရန်အကြောင်းပြချက်အများဆုံးသောသူများသည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသူများဖြစ်ကြသည်။ ရောဂါအချို့မျိုး။ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည် အစားအစာညံ့သောအစာသည်အစာစားခြင်းကဲ့သို့သောသွေးပေါင်ချိန်နှင့်ဆီးချိုရောဂါစသည့်နာတာရှည်ရောဂါများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ညံ့ဖျင်းသောအစားအစာ၏အကျိုးဆက်များ